ဘာသာရေးမဏ္ဏိုင်အဖြူရောင်ဖယောင်းတိုင် - တရုတ် Litbright ဖယောင်းတိုင် (shijiazhuang)
အခြေခံပညာအင်ဖိုမော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G25-0830H အမျိုးအစား: Tapered ပစ္စည်း: Paraffin ဖယောင်းရုပ်အသုံးပြုမှု: စျာပနအခမ်းအနား, အားလပ်ရက်, SPA ကုမ္ပဏီ, ဘာသာရေး, မင်္ဂလာဆောင်, ပါတီ, မွေးနေ့, ပင်မစာမျက်နှာ Lighting, Decoration အမည်: Lighting အရောင်: White ကအရသာ: ရှိကြသည်အရွယ်အစား:7* 10cm 8H ထုတ်ယူခြင်း: Long ကမီးရှို့ခံရသောအချိန်မှို: အမျိုးမျိုးနောက်ထပ်အင်ဖိုထုပ်ပိုးထုတ်ပိုးသေတ္တာ: box ကိုထုပ်ပိုးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား: 30 တန်ချိန်အမှတ်တံဆိပ်: Litbright သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, မူလအစ၏လေကြောင်း Place: တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: နေ့ကလက်မှတ်နှုန်း3× 20 '' fcl အချိန်ကိုမီးရှို့ : BS ...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G25-0830H
Long ကမီးရှို့ခံရသောအချိန်: ကွဲပြားခြားနားသောသေတ္တာထုတ်ပိုး
productivity: 30 တန်ချိန်
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း:3× 20 '' တစ်ရက်ကို fcl
လက်မှတ်: BSCI BV အဒေီ
တောက်ပဖယောင်းတိုင် paraffine ဖယောင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်အရောင်သင်တန်းသင်တို့သည်လည်းအခြားအအရောင်များကိုရွေးချယ်နိုင်, အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ပါပဲ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသေတ္တာနှုန်း 8 အပိုင်းအစ ctn နှုန်းကို 30 သေတ္တာများ, ဒါမှမဟုတ် ctn ထုပ်ပိုးနှုန်း 50 boxes တွေကိုလုပ်ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ဖယောင်းတိုင်ညစာအချိန်များအတွက်, အလငျးသင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းကအရမ်းစိတ်ကူးယဉ်အလှဆင်ခြင်းနှင့်သင်ဖယောင်းတိုင်မျှသောအနံ့သို့မဟုတ်လုံးဝမမီးခိုးဖြစ်ပါတယ်, သင့်ညစာအချိန်ကာလအတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေလျှော့ပါလိမ့်မယ်အသုံးပြုသည်။
မူလအစရာ: သူ Bei, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
6pcsx60box, 8pcs x ကို 30boxes / ctn နှင့်လည်းဖောက်သည်ဖို့လိုအပ်အဆိုအရသိရသည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်: 4x20ft / နေ့
ယခင်: ဝါဂွမ်းမီးစာနှင့် paraffine ဖယောင်းဖယောင်းတိုင်
နောက်တစ်ခု: 10g ထံမှ 100g မှအဖြူရောင်ဖယောင်းတိုင်
Bougie En ပြင်သစ်ဖယောင်းတိုင်ဟော့ရောင်းပါ